सोनाम ल्होछार र ग्याल्बो ल्होछारमा फरक छ - देवेन्द्र लामा तामाङ - Tamang Online
तामाङ समुदायको महान साँस्कृतिक पर्व २८५५ फाग ल्हो बँदेल बर्ग सोनाम ल्होछार यही माघ २२ गते नेपाल सहित विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा मनाईदै छ । सोही दिनको अवसर पारेर सो दिनभन्दा अघि र पछि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने तय भईसकेको छ । नेपालमा विशेष गरी तामाङहरुले पनि लामा लेख्ने चलन चलेको छ अनि तामाङ समुदायभित्रै पनि सोनाम र ग्याल्बो ल्होछार मनाउने छुट्टा–छुट्टै तामाङहरु छन् । वास्तवमा लामा र तामाङमा के फरक छ ? अनि ग्याल्बो ल्होछार र सोनाम ल्होछारमा के समानता र असमानताहरु छन् ? यसै विषयमा मकवानपुरका चर्चित तामाङ लेखक, तामाङविज्ञ र ईतिहासका खोजकर्ता देवेन्द्र लामा तामाङसँग हाम्रा संवाददाता सन्देश थिङले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश–
१. समय र संवादका लागि धन्यवाद ।
« प्रधानमन्त्री ओलीले सोनाम ल्होछार–२८५५ मूल समारोहको समुद्घाटन गर्ने (Previous News)
(Next News) इजरायलमा नेपाली नयाँ बर्ष २०७६ सांगीतिक साँझ भव्यताको साथ मनाउने तयारी »